– अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले निजगढ विमानस्थल, काठमाडौं–तराई द्रुतमार्ग र रेल्वे परियोजनामा बजेटको अभाव नहुने बताएका छन् । मंगलबार प्रस्तावित निगजढ विमानस्थल र जनकपुर–जयनगर रेल्वे परियोजनाको स्थलगत अनुगमनमा पुगेका मन्त्री डा. खतिवडाले प्राविधिक काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिँदै स्रोतको व्यवस्थापन सरकारले गर्ने बताएका हुन् ।
– संयुक्त राष्ट्र संघको तथ्यांक अनुसार संसारभर १ सय ९५ वटा देश छन् । ती मध्ये स्न २०१९ मा नेपालमा कम्तीमा १ सय ७० वटा देशका नागरिकले भम्रण गरेका छन् ।
– सरकारी स्वामित्वको जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले ५ वर्षे व्यवसायीक योजनालाई कार्यान्वयनमा जोड दिएको छ । सोमबार बसेको कम्पनीको आठौं वार्षिक साधारणसभामा कम्पनीका अध्यक्ष तथा उर्जा सचिव दिनेशकुमार घिमिरेले ५ वर्षे व्यवसायीक योजना अन्तर्गत निजी तथा सरकारी स्तरबाट विकास गरिने जलविद्युत कम्पनीमा ३६ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लगानी गर्न लागिएको बताएका हुन् ।
– आम्दानीभन्दा खर्च बढ्न थालेपछि झापामा साना किसानले चिया बगान मास्न थालेका छन् । यतिबेला बिर्तामोड, भद्रपुर, हल्दिबारी र खजुरगाछीका किसानले चिया बगान फँडानी गरिरहेका छन् ।
– सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाका लागि फ्रान्स र जर्मनीका कम्पनीले क्रमशः २३ अर्ब र २२ अर्ब रुपैयाँ लागतको प्रस्ताव गरेका छन् । यहि रकमको वरिपरि रहने गरी सरकारले खुला प्रतिस्पर्धा नगराई सुरक्षण मुद्रण उद्योग स्थापनाको तयारी गरिरहेको छ ।
– पछिल्लो महिना नेपालबाट निर्यातको १ नम्बरमा रहेको पाम तेललाई भारतले आयातमा रोक लगाएपछि सरकारले अनौपचारिक वार्ता सुरु गरेको छ । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका प्रवक्ताका अनुसार अनौपचारिक छलफलमा भारतले समाधान गर्ने संकेत दिएको छ ।
– नेपालमा विश्वका १५८ राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रने गरेको एक तथ्यांकले देखाएको छ । वैदेशिक रोजगारका लागि नेपाल सरकारले संस्थागत रूपमा ११० वटा राष्ट्रसँग सम्झौता गरे पनि डेढ सयभन्दा बढी राष्ट्रबाट रेमिट्यान्स भित्रिँदै आएको राष्ट्र बैंकको तथ्यांकले देखाएको हो ।
– मोबाइल टावरमा आक्रमण गर्दा अत्यावश्यकीय सेवा प्रभावित भएको उल्लेख गर्दै त्यसो नगरिदिन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले आग्रह गरेको छ । पछिल्लो समय नेपाल टेलिकम, एनसेललगायत दूरसञ्चार सेवा प्रदायकका मोबाइल टावरमाथि शृंखलाबद्ध आक्रमणका घटना भइरहेका छन् ।
– नेपाली बजारमा सुनको मूल्य घटेको छ । मंगलबार सुन तोलामा ८ सयले घटेर ७४ हजार रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको नेपाल सुन चाँदी महासंघले जनाएको छ। यस्तै, तेजावी सुन तोलाको ७३ हजार ७ सय रुपैयाँ कायम गरिएको छ। चाँदी तोलामा ८८० रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
– गण्डकी प्रदेशले प्रदेशअन्तर्गतका ८५ वटै स्थानीय तहमा ‘हेलिप्याड’ निर्माण अभियान कार्यान्वयनमा ल्याएको छ । स्थानीय तहमा विपद् व्यवस्थापन तथा आपत्कालीन उद्धार कार्य तथा पर्यटकको आवागमलाई थप सहज बनाउने ध्येयले ‘हेलिप्याड’ निर्माणको अभियान थालिएको जनाइएको छ ।
– कर्णालीमा सुरुङमार्ग निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारको योजना तत्कालका लागि टरेको छ। प्रदेश सरकारले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममार्फत महत्वाकांक्षी योजनाका रुपमा सुरुङमार्ग निर्माणलाई प्राथमिकता दिएको थियो। तर संघीय सरकारले सहमति नदिएपछि सुरुङमार्गको सम्भाव्यता अध्ययनको प्रक्रिया नै स्थगित भएको हो।
– सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसेनल लिमिटेडले सहयोगी विकास बैंक लिमिटेडलाई आफूमा गाभ्ने गरी अन्तिम सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको छ । सोमबार आयोजित कार्यक्रमकामा सिटिजन्स बैंकको तर्फबाट प्रवलजंग पाण्डे र सहयोगीका तर्फबाट डिल्लीप्रकाश घिमिरेले प्राप्तिसम्बन्धी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे ।
– संसदको अर्थ समितिमा बैंकलाई सेयर दलालको इजाजत ‘दिने की नदिने’ भनेर बहस लम्बिरहेको बेला ब्रोकरले बैंकलाई लाइसेन्स दिनु उचित नहुने बताएका छन्। सूचीकृत सेयरको झण्डै ६० प्रतिशत बैंक तथा वित्तीय संस्थाकै रहेकाले उनीहरूलाई नै सेयरको ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा कारोबारमा स्वार्थ बाझिने ब्रोकर बताउँछन्।
– कोरियाको कृषि क्षेत्रमा कामदार पठाउन समस्या भएको छ। मौसमअनुसार काम हुने र हिँउ पर्दा काम नहुनेलगायत कारण कृषिमा पास भएका अधिकांश युवा कामका लागि कोरिया जान पाएका छैनन्। कोरियन भाषा पास भएका साढे ५ हजारभन्दा बढी युवा कोरिया जान पाएका छैनन्। कृषि क्षेत्रमा मौसमअनुसार माग आउने भएकाले भाषा पास भएका अधिकांश युवा रोकिएका हुन्।
– आमउपभोक्तालाई गुणस्तरीय वस्तु आपूर्ति सुनिश्चित गर्न बजारलाई स्वच्छ र अनुशासित बनाउने जिम्मा पाएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीकै टेबलमा लेबल उल्लेख (म्यादबिना) नभएको खानेपानीको बोतल फेला परेको छ। उपभोक्ता संरक्षण ऐन कार्यान्वयन गर्ने उक्त मन्त्रालयका विभागीय मन्त्री लेखराज भट्ट र सचिवद्वय वैकुण्ठ अर्याल तथा यामकुमारी खतिवडाको टेबलमा लेबल उल्लेख नभएको सिलबन्दी खानेपानीको बोतल फेला परेपछि उत्पादकलाई कारबाही गरिएको छ।
– सर्वोच्च अदालतले भाटभटेनी सुपरमार्केटले नक्कली भ्याट बिल प्रयोग गरेर राजस्व छली गरेको ठहर गरेको छ । राजस्व न्यायाधीकरणबाट भएको फैसला सदर गर्दै सर्वोच्चले सोमबार उक्त निर्णय सुनाएको हो । भाटभटेनीले मूल्य अभिवृद्धि कर छली र त्यसका आधारमा आयकर समेत छली गरेको आधारमा ८० करोड रुपैयाँ राजस्व निर्धारण भएको थियो ।
Previous: खण्डहरको शहर (प्रेरक कथा)